dagaalkii saaka ka dhacay Magaalada Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 28 November 2015
Gaalkacyo ( Mareeg)-Wararka aan iminka ka heleyno Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in dagaal culus uu ka soconayo Gudaha Magaaladaasi.
Goob Joogayaal ayaa Shabelle u xaqiijiyay in Ciidamada Maamulka Puntland lagala wareegay Kontaroolkii Koofurta Magaalada Gaalkacyo ay ku lahaayeen.
Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka mar kale dib uga qarxay Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Dagaalka ayaa dib u qarxay xilli Masuuliyiin sar sare oo dowladda Federaalka Soomaaliya ka tirsan ay u baxeen si labada dhinac ay ukala dhex galaan kuwaas oo uu ka mid yahay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.